Ngosi ihe ngosi na Belgrade ga-eweta ikike ndị njem nleta nke mpaghara Russia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » Ngosi ihe ngosi na Belgrade ga-eweta ikike ndị njem nleta nke mpaghara Russia
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Mgbasa Ozi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Akụkọ Serbia na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Serbia ga-anabata 42nd International Belgrade njem nlegharị anya na February 20-23, 2020. A ga-ewepụta ikike njem nleta nke mpaghara Russia dị ka akụkụ nke ngosipụta nkwonkwo na nnukwu ihe omume njem a na South-Eastern Europe. Onye nnọchi anya ndị Russia ga-abụ Olga Yarilova, onye osote Mịnịsta nke Ngalaba Omenala nke Russian Federation.
Kaluga, Ryazan, Tver, Tula, na Tyumen mpaghara, Komi Republic, Republic of Crimea, Republic of Buryatia, Central Museum of the Great Patriotic War, onye ọrụ njegharị "Caprice", "nka nka nke Russia" Association, na GlobalRusTrade ga gosiputa ọdịnala ọdịnala na akụkọ ihe mere eme ha, ntụrụndụ nkịtị, ụzọ ụkwụ, na ọdịnala ọdịnala na nguzo Russia.
Mee 2020 bu akara ncheta afọ iri asaa na ise nke oke mmeri. Ihe omume a dị ịrịba ama bụ akụkụ nke ụwa, akụkọ ihe mere eme Russia na Serbian ma nye ya nlebara anya pụrụ iche na ihe ngosi ahụ na Belgrade. Ndị sonyere ga-egosiputa njegharị ndị agha-ịhụ mba n'anya maka ihe omume na ihe ngosi nke Agha Worldwa nke Abụọ, na Central Museum nke Oké Agha Patriotic ga-egosi ha site na iji teknụzụ VR, na-eweta ihe ngosi ngosi ihe ngosi nka pụrụ iche ha.
Mba ndị ahụ na-atụle mmepe nke njegharị ga-ewebata ndị njem na nka nka ndị Russia na nke ndị Serbia. Ebumnuche a dị ezigbo mkpa: 2022 ga-abụ afọ nke ọdịnala ọdịnala na ọdịnala ọdịnala na-enweghị atụ na Russia. Na ngosipụta "Sajam Turizma" a ga-egosipụta isiokwu nke ọrụ omenaala na ahịa. Site na nkwado nke Mịnịstrị nke Mmepụta na Azụmaahịa nke Russian Federation ma mejuputa ya na GlobalRusTrade ụlọ ọrụ nka na nka na-arụ ọrụ ga-arụ ọrụ na nkwụnye ahụ. Ndị ọbịa ga-amata ọrụ ndị mara mma nke ndị na-ese ihe anyị na-arụ, ọtụtụ ga-enwe ike iwere otu mpempe Russia. "Ndị omenkà na nka nke Russia" Association ga-ewepụta nkuzi mmuta ha "Omenala ndị obodo ABC". Na nguzo nke Russia, n'okpuru nduzi nke ndị na-ese ihe na ndị na-ese ihe, onye ọ bụla ga-enwe ike isonye na nkuzi wee nwaa Gorodetsky, Khokhloma, Mezen or Boretsky handicraft, "Gzhel" na "Zhostovo", ma mụta ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ nzuzo nzuzo mara naanị ndị isi ukwu. Tụkwasị na nke a, a na-enye mpaghara mpaghara foto iji were ezigbo nwa bebi matryoshka were see foto.
Site na 21st nke February na nguzo Russia nke onye na-ese ihe si Republic of Buryatia ga-eme egwu na-abụ abụ ma kpọọ ngwá egwu mba.
Iji kwalite njem nlegharị gastronomic nke Russia, ụbọchị nke abụọ nke ngosipụta Belgrade, nguzo ndị Russia ga-anabata oge gastronomic "Mmasị nke Russia", n'oge nke ndị ọbịa ngosi ga-enwe ohere ịtọ mpaghara mpaghara Russian omenala.
Ndị nnọchi anya ndị nnọchi anya "Caprice" ga-ekwu maka ohere nnata ndị njem Serbia na Russia.
Kwa afọ njikọ njikọta ndị njem nleta na Russia na-ewusi ike. Ndị njem njem si Serbia gaa Russia na-eto. Mpaghara Russia nwere mmasị ịgbasa ọdịdị ala nke njem ndị njem nleta Serbian, na-arụsi ọrụ ike na-akwalite ma na-enye njem nleta na mpaghara na nke interregional na ahịa ndị njem Serbian. N'ime ha, "njem nke Imperial", jikọtara akụkọ ihe mere eme nke ezinụlọ Royal na ijikọ ọtụtụ mpaghara - site na Moscow na St. Petersburg ruo Siberia, Tyumen na Tobolsk, "Russia - ebe ọmụmụ nke cosmonautics" na njem "ọla olu ọlaọcha", na-ewebata ochie Russian ugwu ugwu-obodo. Njem nlegharị anya nke izu ụka, mmemme ezumike ezinụlọ, ahụike, njem uka, na njegharị gastronomic abụrụla nke emepụtarala maka ndị njem Serbia.
A na-ahazi ọtụtụ ihe omume n’oge ndị nnọchi anya ndị nnọchi anya Russia. Nnukwu mmeghe nke ihe ngosi foto "Na oghere nke agha", nke a raara nye afọ 75 nke mmeri nke nnukwu agha Patriotic, ga-eme na 20 nke February na etiti sayensị na omenala Russia. Zarni El folk music ensemble (Komi Republic) na onye na-agụ egwu na akpịrị si Buryatia ga-eme na mmeghe nke ngosi ahụ.
A ga-eme ihe ngosi banyere ọdịbendị na njem nleta nke mpaghara Russia maka ndị ọkachamara na-ahụ maka njem nleta na ndị nnọchi anya mgbasa ozi na February 20. Ihe omume na ọrụ nke nguzo Russia na-ezube ime ka ọha na eze mara na ndị ọkachamara Serbian na njem mpaghara na ọdịnala mpaghara Russia.
N'otu ubochi ahu, abali abuo nke onwa iri abuo n’ime onwa mbu, ndi oru nke omenaala na njeghari n’ime kompeni ochichi Russia-Serbia maka ahia, aku na uba, sayensi na oru ga-enwe nzuko.
Anyị na-echere gị na nguzo ndị Russia na Belgrade
(Expocentre nke Belgrade, Bulevar vojvode Mišića 14, ụlọ № 1,
guzoro №1311 / 1).
Ihe ngosi a ga - eme na February 20,
Beogradski Sajam, obere ọnụ ụlọ - Osisi, na 14.00.
Maka nyocha nzere ntozu metụtara nsonye in the presentation, please contact: violetta@euroexpo.ru \_ mice@euroexpo.ru
Iji hazie nzukọ B2B n'otu n'otu with participants from the Russian stand, please contact: violetta@euroexpo.ru\_ mice@euroexpo.ru
The ọrụ nke Russian guzoro - OOO “Euroexpo”, onye nhazi mgbụsị akwụkwọ International Russian tour forum “LEISURE” (Moscow, “Expocentre)
Emere ihe ngosi njem nlegharị anya nke mba Sajam Turismo (IFT) na Belgrade maka afọ 42 n'usoro ma bụrụkwa ihe ngosi njem nleta kachasị na Balkan. Na 2019, ihe karịrị ndị ngosi 900 sitere na mba 40 keere òkè na Sajam Turizma. Ihe ngosi ruru ndi mmadu 65 puku mmadu. Kemgbe 2003 Sajam Turismo bụ onye otu European Association nke ngosipụta njem nleta - ITTFA na International Association of exhibition exhibition - ITTFA.
agbasa ozi ọma